HALKAAN KA AKHRISO W.W MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER ARBACO 27-NOV- 2019
Wednesday November 27, 2019 - 09:13:28 in Wararka by Mogadishu Times
DFS oo ka tacsiyadeeysay Ciidamo Faransiis ah oo shil ku geeriyooday DFS ayaa waxaa ay ka tacsiyadeeysay 13 Askari oo dowladda Faransiiska ugu geeriyooday shil Diyaaradeed oo ka dha cay waqooyiga Dalka Maali. Qoraal kaso baxay XFS ay
DFS oo ka tacsiyadeeysay Ciidamo Faransiis ah oo shil ku geeriyooday DFS ayaa waxaa ay ka tacsiyadeeysay 13 Askari oo dowladda Faransiiska ugu geeriyooday shil Diyaaradeed oo ka dha cay waqooyiga Dalka Maali. Qoraal kaso baxay XFS ayaa waxaa la gu sheegay in Dowladda Soomaaliya iyo faransiiska uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dhe er oo iskaashi iyo wax wada qabs ah. Shilkaan ayaa ah kii ugu khasaaraha bad naa ee hal mar gaara Ciidamada faransiis ka tan iyo markii la geeyay dalka Maali sanadkii 2013-ka.
Dowladda Federalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo si wadajira u beeniyay war lagu faafiyay baraha bulshada
Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda DFS ayaa beenisay war la soo dhigay qa ar ka mid ah baraha Bulshada oo sheega yay in Macalimiin masaari ah loo diidey in ay soo galaan dalka ama joogaan.
Hay'addu waxay caddeysay in sawira da la baahiyey ay yihiin kuwa been abuur ah oo aan Sal iyo raad toona laheyn.
Si lamid ah, hay'adda socdaalka iyo jin siyadaha Puntland, ayaa sidoo kale beeni yay warkaas, iyadoo sheegtay inaanu gar anayn cidda warkaas been abuurka ah lagasoo xigtay.
Agaasimaha hay'addaas Maxamed Ca bdi Faarax Qamdi oo ay la xidhiidhtay Hiraan Online, ayaa u sheegay inaanu jirin wax culays ah oo xilligaan lagusoo rogay macalimiinta ajaanibta ee sida sharciga ah ku jooga gudaha Puntland.
Puntland ayaa kamid ah meelaha ay ku badan yihiin macalimiinta ajaanibta ee ka yimaada wadamada, Kenya, Uganda, Masar iyo Eeshiyaanka, kuwaas oo baray aal ka ah jaamacaddaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada.
Meydka gabar 15-Jir ah oo laga soo saa ray dhismo ku soo dumay
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa M/Muqdisho Cumar Maxamud Max amed (Cumar Finish) ayaa Shalay mark ale booqday dhismaha qadiimiga ah ah ee wasaarada arimaha gudaha ee degmada Boondheere halkaas oo uu Caawa Guri ku soo dumay dhismahaas.
Waaxda gurmadka deg dega ee Maa mulka G/Banadir ayaa Shalay dhismaha Guriga soo dumay waxaa ay kasoo saare en meydka gabar 15-Jir ah oo uu kusoo dumay dhismahaasi.
Duqa M/Muqdisho Md. Cumar Finish ay aa ugu baaqay bulshada gobolka Banaa dir inay ka fogaadaan dhismooyinka qadi imiga ah si aysan u dhicin khasaare nafe ed iyo mid hantiyad eed.
Caawa ayay sidoo kale aheyd markii la ba qof ay qaadeen roobkii daadadka wat ay ee ka da’ay Gudaha Magaalada Muqd isho ay ku dhinteen Xaafada laami yaraha soobe ee Buulo xuubey degmada Wadajir ee Gobolkan Banaadir.
Ammaro laga soo saaray Shirarka Siy aasadeed Magalada Dhuusamareeb
Laamaha Amniga dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee ka howlgalla Mag aalada Dhuusamare eb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay soo saareen amaro la xiriira in shirar siyaasadeed lagu qabto Magaalada Dhuusamareeb.
Amarada ayaa waxaa lagu sheegay in marnaba shir aysan dowladda Federaalka ogeyn lagu qaban Magaalada Dhuusama reb, iyada oo warqado digniin ah loo geey ey Milkiilayaasha Hoteelada Magaalada.
Sidoo kale laamaha Amniga dowlad da Federaalka ah ee Soomaaliya ee ka howlgalla Magaalada Dhuusamareeb ay aa waxaa ay sheegeen in tallaabo ay ka qaadi doonaan cidii qabata shir aysan ka warheyn dowladda Federaalka Soomaal iya.
Dhinaca kale Ciidamada Ammaanka D FS ayaa xalay muddo kooban waxaa ay la wareegeen goob Mowlac ah oo ay ku sug naayeen Culumo taageersan Ahlu Sunna, waxana la sheegay in joojiyeen howlihii halkaas ka socday.
Israa’iil oo musaafurisay sarkaal ka tirs an Hay’adda Human Rights Watch
Xukuumadda Israel ayaa masaafurisay sarkaal sare oo ka tirsan koox da xuquuq da Insaanka ee Hu man Rights Wat ch,kas oo lagu eedeeyay inuu taageeray olole la gu qaadacayo alaabada u soo da ga iyo adeegyada kale ee ay dhoofiyaasn.
Talaabada lagu eryay Agaasimaha ha y’adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa lagu micneyay in ay waafaqsan tahay sha rciga Israa’iil ee ee soo baxay sanadkii 2017, kaas oo xannibaya gelitaanka dad ka si guud u taageera dhaqdhaqaaqyada looga horjeedo dadka Yuhuudda,isla mark aana lagu taageeraayo dadka reer Falast iin ee ku howlan kacdoonadaa ay isaga dul kicinayaan Israa’iiliyiinta ku soo duul ay. Sanadkii 2016-ki Hey’adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch waxay ugu baaqday in la joojiyo ganacsiga la xiriira dhismooyinka sharci darada ah ee Israel ay ka waddo dhinaca ay maamula an ee daanta galbeed.
Puntland oo guddi xaqiiqo raadin ah u dirtay gobolada Roobabku saameeyeen
Dowlad goboleedka Puntland, ayaa gud di xaqiiqo raadin ah u diray gobolka Garda fuu oo kamid ah gobolada Puntland ee waxyeeladu kasoo gaartay Roobabkii Day rta ee ka da'ayay maalmahaan.
Wasiirka howlaha guud ee Puntland, Axmed Bashiir Muuse oo xubin ka ah gud digaan ayaa warbaahinta u sheegay in mu ddo 4 maalin ah uu gobolkaasi ku jiro xaalad u muuqata go'doon.
Wasiirku wuxuu sheegay in tilaabada ugu horeysay ee uu maamulku qaadayo ay tahay in dadka halkaas ku dhaqan loo geeyo wax nolol maalmeed ah, maadaa ma intii roobku socday ay nolashii kala xir antay. Puntland ayaa kamid ah me elaha ay ku soo noqnoqdaan abaaraha iyo kha saar aha roobabka, hase ahaatee maa mulka ay aa lagu dhaliilaa in uusan yeelan qor she ku talo gal oo lagu maareeyo dhibaat ooyinkaas. Waqti xaadirkaan, Wa dada dheer isku xirta Gaalkayo iyo Bosa so, ayaa ku dhow inay xiranto kadib bur bur xoogan oo soo gaaray, inkastoo maa mulku uu dhawaan dayactir ku bilaabay wadada Garowe iyo Bosaso, isagoo taage ero ka helaya Imaar aadka.
Ahlu Sunna oo afar qodob ka soo saar tay doorashada maamulka Galmudug
Hoggaanka sare ee Ahlu Sunna ayaa Caawa go,aanno cusub ka soo saaray xaa ladda Galmudug, gaar ahaan doorashada maamulkaasi Qodobada oo ka kooban ill aa 4 ayaa dhamaantood waxa ay yihiin ku wa liddi ku ah DFS oo garwadeen ka ah dhismaha Galmudug oo mid ah.
Sidoo kale hoggaanka Ahlu Sunna aya a isku raacay in markale warqad ashta ko ah oo looga soo horjeedo dowladda loo di ro beesha caalamka.
Waxaa kaloo qoraal ka ka soo baxay Ahlu Sunna lagu sheegay in ay dhowaan shaacin doonaan habraaca doorashada ee maamulka Galmudug.
Halkan Hoose Ka Aqriso Qodobada:
1: In Ahlusunna ay markale Warqad asht ako ah u dirto Beesha Caalamka,taas oo ay ku sheegayaan in dowladda iska dhega tirtay heshiiskii ay wada galeen,isla marka ana ay guda gashay xulista Baarlamaanka Cusub ee Galmudug.
2: in Guddiga Farsamada iyo dhismaha Galmudug ee uu Magacaabey Sheekh Shaakir ay muddo Todobaad gudahood ay kusoo xulaan kuna shaaciyaan Xubno Baarlamaan oo ka kooban 89 Xubnood.
3: In Ahlusunna wadatashi kadib ay soo saari doonto habraaca doorashada Galm udug iyo mowqifkooda howlaha ay dowla dda Federaalka ka wado deegaannada Galmudug.
4: In tallaabo kasta oo ay qaadayaan Ahlu sunna ay noqdaan kuwo taxadar leh,iyada oo hoggaamiyaha Ahlusunna Maxamed Maxamuud uu walaac ka muujiyey sida ay dowladda u wado dhismaha Maamulka Galmudug.
Shalay ayey aheyd markii guddiga fars amada oo ay ku dhawaaqday dowladda dhexe uu shaaciyey jadwadka doorashada baarlamaanka iyo mida madaxweynaha ee dowlad goboleedka Galmudug.
Safiirka Dowladda u fadhiya Washing ton oo socddaallo ku maraya gobolada Mareykanka ee ay degaan Soomalida
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaal ada Columbus Ohio ayaa kulan soo dhaw eyn ah u sameysay Safiirka Dowlada Soo maaliya u fadhiya dalka Mareykanka Ali Sharif Ahmed iyo safiirka Dowladda Soo maaliya u fadhiya Q/Midoobay Abukar Osman.
Kulankaasi dhexmaray dhinacyadaasi ayaa ujeedkiisu ahaa sidii la isugu xiri lah aa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykan ka iyo Safaaradd Soomaalida ee Washingt on DC oo ahmiyad gaar ah u leh jaaliyadd aasi,waxaana Safiirka uu kulamo gooni gooni ah la qaatay qeybaha bulshada ee ku dhaqan halkaasi.
Safiirku waxa uu ballan qaaday in safa aradu qaban doonto howlaha loo idmaday iyo in ay ka soo dhallaali doonto rajada Ja aliyadaha Maraykanku ka qabaan isbad dal lagu sameeyo maamulka ,gaar ahaan sidii safaaraddu irdaha ugu furi lahayd dad ka Soomaaliyeed.
Safiir Ali Shariif Ahmed ayaa looga fa dhiyaa mudada uu socdaalka ku marayo gobolada Mareykanka in uu wax ka qabto xalinta dhibaatooyinka gudaha Mareykan ka ku qabsaday Jaaliyadda, sii deynta car uurta xabsiyadda ka buuxda, xal u helida dadka sharci la’aantu ah ee dowladda mar eykanku musaafuriso, mushkiladda xawil aadaha ee Bangiyada iyo arimo kale oo
aad u badan
Somaliland oo xabsiga u taxaabay dad u dhashay Imaaraadka Carabta
Wararka ka imaanaya magaalada Harg eysa ayaa sheegaya in Ciidamada Boolis ka Somaliland ay Shalay ku xireen garoon ka diyaaradaha Cigaal 9 ruux oo u dhalat ay dalka isu tagga Imaaraadka Cara bta.
Sida wararku sheegayaan raggan ayaa la sheegay inay ahaayeen Ugaarsato, wax aana muddooyinkii u dambeeyay ku sugn aayeen deegaano ka tirsan Somaliland oo ay u joogeen howlo ugaarsato.
Agaasimaha Duur-Joogta ee Wasaar adda deegaanka Somaliland Naasir Xuse en ayaa sheegay in sagaalka nin ee u dhalatay Imaaraadka Carabta ay si sharci darro ah uga ugaarsanayeen deegaano ka tirsan Somaliland.
Waxaa uu sheegay in raggan la mars iin doono sharciga, maadaama ay sameey een xadgudub iyo inay deegaanada Som aliland ka ugaarsanayeen, iyagoo aanay wax sharciyad ah heysan. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya raggan oo ku sugan bann aanka garoonka diyaaradaha Cigaal, lagu na qaadayay gawaarida booliska ay leeyih iin, waxaana laga reebay diyaarad ay saak ay u raaci lahaayeen magaalada Dubai.
Golaha Ammaanka Ee QM Oo War Ka soo Saaray Xaaladda Somaliya
Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Q/Midoobay, James Swan, Wak iilka Gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soo maaliya Francisco Madeira, Guddoomiya ha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorash ooyinka Qaranka Soomaaliya ayaa todoba adkii la soo dhaafay warbixin Golaha Am maanka QM ka siiyay Xaaladda Somaliya.
Xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa soo dhoweeyay ballanq aadka ay Dowladda Federaalka Soomaali ya (FGS) ka geysatay Madasha Iskaashi ga Soomaaliya 2dii Oktoobar ee sannad kan, kaasi oo ahaa in la qaato sharciga doorashada illaa Diseembar 2019.
Sidoo kale Xubnaha Golaha Ammaan ka ayaa hoosta ka xariiqay in hadii la qab to Doorasho qof iyo Cod ah oo ku dhacda si nabad ah, oo hufan ay noqon doonto tal laabo taariikhi ah oo la qaaday, isla marka ana dib-u-dhiska iyo horumarka Soomaal iya gacan ka geysaneysa.
Golaha Ammaanka ayaa waxaa ay carrabka ku adkeeyeen in geeddi-socodka doorashada ay tahay inuu noqdo mid loo dhan yahay, kaasoo oggolaanaya ka-qaybgal dhammaan deegaanada Gobolla da dalka oo dhan, waaa inay ka qeyb qa atan haweenka oo Xildhibaanada Baarl amaanka dalka laga siiyo ugu yaraan 30% qoonde ah
"Golaha Ammaanka QM waxay soo dhoweeyeen doorka Guddiga Madaxa Ba naan ee Doorashooyinka Qaranka ee u diyaar garowga doorashada waxayna ku celiyeen baahida loo qabo in Gudiga ay la kulmaan oo ay dejiyaan qorshe sida ugu dhaqsaha badan ee abuuritaanka nabad gelyo iyo xasilooni” ayaa lagu yiri War ka soo baxay Golaha Ammaan”
"Xubnaha Golaha waxay soo dhowe eyeen dadaalka Howlgalka Qaramada Mi doobay ee Soomaaliya (UNSOM) dadaal ka ay ugu jiraan taageerida diyaarinta doo rashada tooska ah iyadoo la waafajinayo waajibaadkeeda, ku biirinta Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) diyaarinta amniga, doorka muhiimka ah. ee Xafiiska Taageerada Qaramada Mido obay ee Soomaaliya (UNSOS) iyo taageer ada ay siiyaan UNSOM, AMISOM iyo Ci idanka Qaranka Soomaaliya, iyo taageera da ay siiso bulshada caalamka” ayaa la sii raacsiiyay Qoraalka ay soo saareen Gola ha Ammaanka ee QM.
Dhulgariir Ku Dhuftay Albaniya Iyo Khasaaro Ka Dhashay
Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.4 ayaa ku dhuftay woqooyiga magaalada Tirana ee caasimadda dalka Albania,kaas oo ge ystay lix dhimasho ah iyo dhaawacyo gaarayua 325 ruux.
Dhulgariirkaan oo ka bilowday magaalada Durres, ayaa lagu waramay in uu saam eyn ku yeeshay dhul baaxaddiisu tahay 13—meyl,kaas oo ku dhow caasimadda Tiraana.
Dhlgariiirkaan oo ah kii ugu weynaa ee mudo tobonaan sano ah ka dhaca Albaan iya,wuxuu burburiyay dhismooyin badan, iyadoo sadex dugsi waxbarasho oo ku yiill ay magaalooyinka Durres, Lezhe iyo Tira na la xiray illaa amar dambe.
Wasiirka Caafimaadka ayaas manta oo Tallaado ah sheegay in ugu yaraan ay dhinteen lix,halka uu dhaawacu gaarayo 325, ruux,waxaana dadweynaha loogu ba aqay in ay ku sii nagaadaan dibadda oo ay ka baxaan guryaha.
Soomaaliya oo laga bilaabayo mashaa riic lagu horumarinayo Warshadaha
W/W/ Gan acsiga iyo Wa rshadaha ee DFS Eng C/hi Cali Xasan ay aa Shalay wa xa uu xafiiskiisa ku qaabiley U qeybsanaha Hay’ adda UNIDO (United Nations Industrial Development) ee dalka Soomaaliya Mr Ygor Scarcia.
Kulan ayaa ahaa mid diiradda lagu saar aya y sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka Was aaradda iyo Hay’adda UNIDO iyo sidii loo ga midho dhalin lahaa xidhiidhkan soo jire en ka ah. Hay’adda UNIDO oo ah hay’a dda QM u qaabilsan horumarinta Warsha daha ayaa Soomaaliya ka bilaaba ysa ma shaa riic lagu horumarinayo Warsh adaha dalka Soomaaliya, waxaanay barn aami jkan iska kaashanayaan Wasaaradda Ga nacsiga iyo Warshadaha DF/Somaliya.
Kulankan ayaa kusoo dhammaaday waji is afgarad iyo in wada shaqeynta lasii xojiyo.
Shirka Afrika & Italy Business Week oo si rasmi ah u furmay.
Shirkani oo u dhexeeya dalalka Afrika iyo Talyaaniga loogu na magaca daray (Afr ika & Italy Business Week) ayaa si rasmi ah uga furmay M/Mil ano ee dalka Talyaa niga, kaasi oo ay si wada jir ah u fureen Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiis ka XFS Md.Maxamed Cabdi Xayir (Maa reeye) iyo wasiir kuxigeenka arrimaha diba dda ee dalkaasi Talyaaniga (Emanuela Claudia Del Re).
Inta uu socdo shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha Ganacsiga Dalxiiska,iyadoo ay iska kaashanayaan wadamada Talyaaniga iyo Afrika oo Soom aaliyana ay kujirto sidii looga faa’ideysan lahaa fursadaha ganacsiga Dalxiiska ee 2da dhinac,wuxuuna socodn doonaa mud do labo maalmood ah.
Md.Maareeey oo ka hadlayay furitaanka shirkan (Afrika& Italy Business Week) ay aa dowladda Talyaaniga iyo Shacabkeeda ku ammaanay martigelinta muhaajiriinta Afrika ee dalkaasi galaya.
"Marti sharafka, hal abuurayaasha bul shooyinka Italy iyo Africa,diplomaas iyiinta ,dhamaan mamuuskasta oo aad halkani ku fadhisaan,waxaan idin leeyahay subax wanaagsan , anigoo ku hadlaya magacay ga iyo kan wafdigan aan hoggaaminayo, marka ugu horeysa waxaan rabaa in aan halkan kaga mahadceliyo dowladda iyo shacabka Talyaaniga,casuumaaddani oo ku aadan shirkan (Africa & Italy Business Week)kaasi oo ay martigelinayso magaal adan quruxda badan ee Milano,waxaan ra baa markale anigoo ku hadlaya magaca wadamada Afrika in aan uga mahadceliyo dowladda Talyaaniga badbaadinta iyo mar tigelinta muhaajiriinta badan oo Afrikaan ah,kuwaasi wadankan ku soo galaya hab sharci daro ah".Ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Dhanka kale Wasiirka Warfaafinta Waxuu la kulmay shir fool ka fool ahna la yeeshey Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada Dalka Talyaaniga Emanuela Clau dia Del Re ,iyagoo ka wada hadlay horu marinta warbaahinta gaar ahaan Keydka Radio Muqdisho.
C/risaaq Cabdi Cadullaahi agaasimaha Waaxda Dalxiiska ee Wasaaradda Warfa afinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale ayaa ku wehliya safar ka wasiirka,waxaana inta ay halkaasi joo gaan sidoo kale kulamo kaladuwan la yeelan doonnaan mas’uuliyiinta shirkaasi ka qeybgalaysa.
Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya ayaa muddooyi nkan dambe ku howlanayd sidii loo horu marin lahaa ganacsiga Dalxiiska Dalka, maadaama dalka uu haatan ka soo kabsa naya dagaaladii sokeeyey iyo burburkii, isla markaana uu cagta saaray dhabihii horumarka dowladnimo.
Xoghayihii Joogtada Ee Wasaaradda A/Gudaha Oo Xilkii Wareejiyay Kadib Go’aan Soo Baxay
Xoghayihii joogtada ee Wasaaradda arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta XFS ayaa Shalay xilkii Xogha yanimo wareejiyay, kadib markii golaha Wasiiradu ay baa bi’iyeen boos ka Xoygha yaha joog tada ee Wasaara da ha Xukuumad da laguna qaatay nidaamka Agaasimay aasha guud.
Xoghayihii joogtada ee Wasaaradda arrimaha gudaha, Md. C/hi Maxamuud Xa san (Azhari) oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa u mahadceliyay Shaqa alaha Wasaaradda,isagoo sheegay inay kaalin weyn kaga jiraan howlaha ay bulsh ada u heyso Wasaaradu.
Xoghayaha ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsanyahay in uu xilkaan wareeji yo,isagoo tilmaamay mudadii 2da sanno eheed oo uu xilka hayay inuu wax badan soo qabtay, waline ay shaqa badan dhim antahay.
Munaasabadda xil wareejinta oo ka dha cday xarunta Wasaaradda arrimaha guda ha waxaa goobjoog ka ahaa shaqaalaha Wasaaradda, Mas’uuliyiin ka tirsan dowla da iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Md. Isaaq Maxamed Maxamuud.
Roobkii Ka Da’ay Muqdisho Oo Saam eyn Ku Yeeshay Barakacayaal
Guddoomiyaha deegaanka Garasba aley C/raxmaan Ax md Cali (Garyare) ay aa Shalay kor me er guud oo qii me yn ah ku soo sa meeyay barakaca yaasha ku nool Ga rasbaaley oo saameyn xoog leh ku yee shay roobabkii da’ay.
Kormeerkan oo qaatay saacado badan ayaa waxaa qeyb ka ahaa Guddoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada C/laahi Cabdi Maxamuud, Xoghayaha Garasbaal ey C/raxiin C/laahi Liibaan.
Guddoomiye Garyare iyo xubnaha ka le ayaa intii ay kormeerka ku jireen waxa ay goobaha caafimaadka u direen dhawr qof oo roobka iyo qabowgiisa uu saameyn ku yeeshay, waxaana ku jiray haween jilic san oo ilmo yar heystay. Guddoomiyaha Garasbaaley ayaa she egay dhibaatada dadkan heysata inay ka sii dari karto, maadaama la filaayo in saa cadaha soo socda ay yimaadaan roobab mahiigaan ah, wuxuuna dowladda federa alka, maamulka gobolka Banaadir iyo hay’ adaha deeqaha bixiya ka dalbaday inay dadkan la soo caawiyaan, si ay u helaan adeegyada la xiriira nolosha aas aasiga ah.
Garasbaaley oo marti gelisay barakac ayaasha ugu badan ee ku nool magaalada Muqdisho ayaan ilaa hada lala soo gaarin wax gargaar ah, tan iyo markii ay bilawd een roobabkii maalmahan socday.
Wasiir Cawad oo la kulmay dhiggiisa Sacuudiga
Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Iskaashi ga Caalamiga ah, ee Xukuumadda Sooma aliya Axmed Ciise Cawad, ayaa kula kul m ay dhigiisa Sacuu diga Amir Faisal Bin Far han Bin Abdallah, magaalada Jeddah ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
2da dhinaca ayaa waxaa ay ka wada ha dleen dadaallada lagu xoojinayo xiriirka la ba geesoodka ah iyo iskaashiga wadajirka ee dhinacyada oo dhan, iyo siyaabaha la gu gaari karo danaha u dhexeeya Muqdisho iyo Riyadh.
Waxay sidoo kale ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta labada dhinac ah iyo ahmiyada ay leedahay sii wadida wadatashiga iyo isku duwista arrimaha guud. Dowladda Sa cuudiga ayaa waxaa ay kamid tahay dalal ka taagera dowladda Soomaaliya, iyada oo dhowr jeer lacago kala duwna ugu dee qday Soomaaliya.
Sadiiq Warfaa oo la kulmay dhigiisa Talyaaniga
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arr imaha Bulshada Xukuum adda Federaalka Sooma aliya Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ku sugan Mag alada Gene va ee dalka Switzerland ayaa kulan gaar ah waxa a uu la qaatay dhigiisa dal ka Talyaaniga Nunzia Catalfo.
Labada mas’uul oo dalkaasi u tegay ka qeyb-galka shirka weynaha looga hadlayo Daryeelka Bulshada ayaa waxaa ay ka wada hadleen arrimo la xiriira Soomaaliya iyo sida dowladda Talyaaniga ay taageero u siin laheyd Soomaaliya.
Wasiir Sadiiq Warfaa, ayaa Xukuumadda Talyaaniga uga mahadceliyay taageerada Soomaaliya , gaar ahaan wada shaqeynta ay la leyihiin w/ Shaqada iyoArr /Bulshada
Ra’iisul Wasaare Kheyre & Safiirka Mar eykanka ee Somalia oo kulmay
Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaali ya Xasan Cali kheyre iyo Safi irka Marey kan ka u fadhiya Soomaaliya Amb, Donald Yamamoto,waxaana kula nkooda ay uga hadleen arrimo dhowr ah.
Qoraal kooban oo la soo dhigay barta twitter-ka ee Safaarada Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen horumarka Somalia ee dhinaca Nabadda,xasiloonida iyo Barwaaqada.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Amb, Donald Yamamoto ayaa sheegay inay muhiim tahay wadashaqeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedyada taas oo horseedi karta soo nooleynta Soomaaliya oo awood leh.
Safaarada Mareykanka ee muqdisho, QM iyo Xubnaha daneeyayaasha Soomaaliya ee Beesha Caalamka ayaa waxaa ay horay u sheegeen inay mudiim tahay wadashaqeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedyada si looga wada qeyb qaato doorashada soo socota ee sanadka 2021 la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya.
Maamulka Af-barwaaqo oo shaaciyey qatar ka jirto deegaankaas
Gudoomiyaha Deegaanka Afbarwaaqo ee Gobolka Mudug ayaa sheegay in ay shacabka ku dhaqan deegaanka Afbarwaaqo iyo Tuulooyin hoostago in ay khatar badan dareemayaan , isagoo xusay in ay jirto Haan Sun ah oo Badda kasoo caarisay oo halis ugu jirto in ay furato.
Gudoomiyaha oo la hadlayay Warbaahinta Dowladda ayaa sidoo kale sheegay in deegaanka ay ka jiraan baahiyo badan oo dhanka arimaha bulshada ah , waxa uu xusay in uusan jirin booliis ka shaqeeyo deegaanka , sidoo kale waxa uu xusay in deegaanka uusan laheyn isbitaal.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in deegaankaas aysan ka howlgelin wax hay’ad ah taasina keentay in Bulshada ay waayaan waxyaabihii muhiimka u ahaa Nolosha Bani’aadamka.